Zvichienderana Packaging Vagadziri | China Flexible Packaging Fekitori & Vatengesi
Akaumbwa muhomwe / Akaumbwa muhomwe ezvekutakura chikafu / Tsika yePurasitiki yakashongedzwa homwe
Homwe maumbirwo anogona kuve akagadziriswa zvakakwana zvichienderana nesarudzo dzako. Mienzaniso inosanganisira:
Convex akaumbwa muhomwe (ergonomic uye nyore kubata)
Hourglass yakagadzirirwa homwe (yakanaka kune zvinwiwa)
Akaumbwa zvikwama nemakona akapoteredzwa
Akaumba homwe pamwe ergonomic Pazvibato
Masaga anokwenenzverwa akaumbwa nemaputi akavakirwa-mukati (kubvisa kudiwa kwekusunga kana mashanga kuti upedze chigadzirwa)
Kubva pamaumbirwo akagadziridzwa kusvika kuzvinhu zvitsva zvakagadzirwa uye zviputi, Changrong Packaging inopa kugona kwaunoda kuti ugadzire homwe dzevatengi-zana dzinoonekera.
Zvinowanzo shandiswa: Chikafu chevana, Zviyo & Zvinoumbwa, Bhekari, Chikafu chekudya, Sipo & Sauces, Kofi & Tea, Zvinwiwa, Hove & Gungwa Chikafu, Kudya Kugadzirira, Rice & Pasita, Chikafu chePeturu, Zvibereko & Muriwo, Chikafu chemukaka, Hutano & Runako
Retort homwe / Pet chikafu bhegi / Yakagadzirira kudya chikafu kurongedza
Retort pouches ave anoshanda zvakanyanya uye anoshanduka ekugadzirisa mhinduro kupfuura echinyakare nzira. Changrong Packaging inopa yakakwira chipingamupinyi kudzosera mabhegi ayo ari anochinja-chinja kurongedza mhinduro yezvakagadzirwa chikafu uye zvimwe zvakagadzirira kudya chikafu. Yedu retort pouches inopa nyore mukati mekutakura kwezvakagara zvakabikwa chikafu uye zvinobatsira kune yakawanda nharaunda inoshamwarika kurongedza sarudzo.
Nekuda kwekuita kwavo nyore nyore, zvigumbuso zvekutsiva zvakatsiva chimiro chechinyakare chegaba uye zvigadzirwa zvehombodo.
Zvinowanzo shandiswa: Chikafu chevana, Soups & Sauces, Hove & Gungwa chikafu, Kugadzirira kudya, Rice & Pasita, Wet Pet chikafu, Chikafu chemukaka, Nyama
Flat pasi pouches / epurasitiki Chikafu Packaging / Zip Lock Chipurasitiki Packaging Bhegi
Yakagadzika-yakadzika-yakasununguka, yakamira-homwe nehomwe yekuwedzera uye kugona kwechigadzirwa. Mabhokisi ebhokisi anopa imwechete yekuzadza bhokisi sarudzo kutsiva Bhegi + Bhokisi. Kupa mativi mana + ezasi epaneru ekudhinda chiratidzo, homwe dzebhokisi dzinopa kuderedzwa kwemutengo nekubvisa kudiwa kwekurongedza zvakapetwa.
Changrong Packaging inopa huwandu hwakajeka hwehomwe yemasheya, anowanikwa kutenga online. Changrong Kavha inogona zvakare tsika-kuvaka bhokisi homwe kuti usangane nezvinodiwa zvako.
Zvinowanzo shandiswa: Kofi, zvinhu zvakaoma, zviyo, confectionery, mabriji echando, hove dzegungwa, munyu & pChangrong Packaginger, herbs & spices
3 padivi rakavharwa & pombi pombi / Vacuum Plastiki Bhegi / Chikafu Plastiki Bhegi
Bhegi rakavharwa pamativi matatu richipa yakapusa, inodhura-mhinduro mhinduro kune hombe kana zvidiki zvakawanda zvechigadzirwa. Aya mahomwe inzira inodhura, inokodzera kuwedzera pasherufu hupenyu hweakawanda ezvigadzirwa zvekudya.
Changrong Packaging inopa anextensive huwandu hwemastock vachu pouchi, anowanikwa kutenga online. Changrong Kavha inogona zvakare tsika-kuvaka yekuzadza pouches kuti uwane zvaunoda chaizvo.
Zvinowanzo shandiswa: Nyama, chizi, tumabhonzo, hove, huku, hove uye zvinwiwa
Yemahara-yakamira kana yakati sandara kurongedza. Iyo gusset inogadzira kuwedzera kwakadzika uye kugona kwechigadzirwa. Rongedza rinogona kuumba bhata repasi. Mativi mana anopa yakasimba chigadzirwa yekumaka mikana.
Changrong Packaging inopa huwandu hwenzvimbo dzehomwe dzekofi dzinowanikwa kutenga online. Changrong Packaging inogona zvakare tsika-kuvaka padivi gusset / quad chisimbiso zvikwama kuti uwane zvaunoda chaizvo.
Zvinowanzo shandiswa: Kofi, mubiki-mu-tireyi inogocha, yakaoma zvinhu, mapoda, confectionery, tii
Spouted homwe / muto & sipo kurongedza / Liquid Pouches
Yemahara-akamira kurongedza emvura, sauces, pastes uye akagadzirira-kusanganisa-mapoda. Yakashongedzerwa kudurura, iyi yekupakira inopa 'no-mess' yekupa sarudzo uye 'chikafu chiri kuenda' snack sarudzo. Yakanakira kuratidza chigadzirwa pasherufu.
Changrong Packaging ine stock zvinhu zviripo zvekutenga online. Changrong Packaging inogona zvakare tsika-kuvaka yakashongedzerwa homwe kuzadzisa zvaunoda chaizvo.
Zvinowanzo shandiswa: Michero puree, stock, sauces, pastes, yakagadzirira-kusanganisa mapoda, sipo
simuka homwe / Zip Lock Plastic Bhegi / Simuka Homwe NeZipper
Yemahara-yakamira kurongedza kwemvura uye zvinhu zvakaomeswa. Kazhinji iine hwindo rakajeka rekuona chigadzirwa, aya mabhegi anopa yakasimba kutarisisa pasherefesi yesupamaketi apo ichipa nzvimbo kugona kwekubatira.
Changrong Kavha inopa masheya renji yakajeka uye sirivheri kumashure / yakajeka epamberi pouches anowanikwa kutenga online. Zvekuwedzera maficha senge yakakwira kubaya kuramba uye pouchi dzinokwenenzverwa, Changrong Packaging inogona tsika-kuvaka kuzadzisa zvaunoda.
Zvinowanzo shandiswa: Soupu, sosi, chikafu chakagadzirira, zviyo, nzungu, maorivhi